aaa | Hulaki Online
२०७६ चैत्र २८, शुक्रबार २३:३३
2020 Sep 18, Friday 01:49
हुलाकीअनल़ाइन - २०७६ चैत्र २८, शुक्रबार २३:३३
फोक्सो किन खराब हुन्छ ? यसमा अनेक कारण छन् । खासगरी वायु प्रदूषण र धुम्रपान फोक्सो खराब गर्ने मूल कारण हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकले देखाउँछ, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष ६० लाख...
राम्रो स्वास्थ पाउनका लागि सही र पौष्टिक भोजन सेवन गर्नु अति नै आवश्यक हुन्छ । यसको साथै आफ्नो दिमाग ताजा र रिल्याक्स गर्नका लागि सही समयमा र सही मात्रामा सुत्नु पनि अति नै आवश्यक छ ।
थ्रेडिङ अर्थात् शरीरका अनावश्यक रौं उखेल्ने काम । हात, पाखुरालगायतका रौंदेखि आँखीभौं आसपासका रौं उखेल्न महिलाहरू महिनामा दुई पटकसम्म पार्लर धाउने गर्छन्। कतिले घरमै पनि थ्रेडिङ गर्छन्। तर, थ्रेडिङपछि हुने दुखाइ र खटिराबाट छुट्कारा पाउनका लागि...
Updated on September 18, 2020 1:08 PM
फिटनेसहुलाकीअनल़ाइन - २०७६ चैत्र २८, शुक्रबार २३:३३
थ्रेडिङ अर्थात् शरीरका अनावश्यक रौं उखेल्ने काम । हात, पाखुरालगायतका रौंदेखि आँखीभौं आसपासका रौं उखेल्न महिलाहरू महिनामा दुई पटकसम्म पार्लर धाउने गर्छन्।...
राम्रो स्वास्थ पाउनका लागि सही र पौष्टिक भोजन सेवन गर्नु अति नै आवश्यक हुन्छ । यसको साथै आफ्नो दिमाग ताजा र रिल्याक्स गर्नका लागि सही...
हामीसँग कतिपय यस्ता प्राकृतिक विधी छन्, जो सौन्दर्यदेखि स्वास्थ्यसम्म लाभदायक मानिन्छ । जस्तो कि, पानीको वाफ । एकदमै सरल र छरितो विधी हो यो ।...
लोकप्रिय भिडियो सेयरिङ एप टिकटकलाई टक्कर दिनेगरी फेसबुकले एक नयाँ एप सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुकको प्रयोगकतात्मक एप विभागले...
भावुक तर सामाजिक सञ्जालमा विवादित करिश्मा
नायिका करिश्मा मानन्धरलाई आफू भावुक भएकै कारण विवादमा आउने गरेको भन्ने लाग्छ। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेको एउटा स्टाटसले पनि यही कुरा बताएको...
गर्भावस्थामा शारीरिक रुपले सक्रिय र मानसिक रुपले सकारात्मक हुनु जरुरी छ । सक्रियता भनेको समुचित शारीरिक क्रिया हो । गह्रौ वा बोझिलो...
त्यसो त कुनैपनि प्राणायाम आफैमा अत्यान्तै लाभदायक छन् । प्राणायामले शरीरमा शुद्ध वायु मिल्छ । फोक्सो, मुटु लगायतका अंगहरुलाई सक्रिय बनाउँछ ।...
सौन्दर्यहुलाकीअनल़ाइन - २०७६ चैत्र २८, शुक्रबार २३:३३
खानपानहुलाकीअनल़ाइन - २०७६ चैत्र २८, शुक्रबार २३:३३
यौन स्वास्थ्यहुलाकीअनल़ाइन - २०७६ चैत्र २८, शुक्रबार २३:३३
सम्बन्ध बनाउन जति सजिलो छ, त्यसलाई निर्वाह गर्न उत्तिकै गाह्रो हुन्छ । जीवनमा खुशीहरु राम्रो सम्बन्धबाटै अँउँछन् । भनिन्छ, जोडीहरु स्वर्गमै तय...
123...867867 पृष्ठ 1